I Qu Dongyu, talen’ny FAO : “Vonona hanampy ny mpamboly” | NewsMada
I Qu Dongyu, talen’ny FAO : “Vonona hanampy ny mpamboly”
Voafidy tamin’ny fihodinana voalohany hitantana ny FAO, ny 23 jona teo, ilay teratany sinoa, i Qu Dongyu. 55 taona ny lehilahy, minisitra lefitra amin’ny fambolena, manampahaizana manokana momba ny fambolena, araka ny fianarana nataony sy ny traikefa vitany nahitan’ny tanora maro tombontsoa amin’io fihariana io. Mpikambana ao amin’ny Akademian’ny siansa momba ny fambolena rahateo izy.
Nahitana ny fikarohana nataony any amin’ireo firenena tsy mahavokatra sy tsy ampy sakafo. Fampanantenana nataony amin’izao nahavoafidy azy izao: « vonona hanampy ny mpamboly ». Firenena maro ny resy lahatra aminy, indrindra ny aty Afrika, ny any Amerika Atsimo sy any Azia Atsimo Atsinanana. Samy efa nalehan’ity tale vaovaon’ny FAO ity ireo firenena ireo, tao anatin’ny fiaraha-miasa amin’i Sina amin’ny sehatry ny fambolena.
Nohamafisiny fa hiaro ny tanjona napetraky ny FAO ny hataony, hiady amin’ny tsy fahampian-tsakafo, ny haintany, ny hampandroso ny fambolena aty amin’ny tapany atsimon’ny tany miaraka amin’ny fampiasana nomerika any ambanivohitra.
Azo lazaina fa fandresen’ny toekarena sinoa izao fahalanian’i Qu Dongyu izao, araka ny voalazan’ny mpanara-baovao maro. Handray ny andraikiny vaovao izy, ny 1 aogositra 2019, handimby ilay Brezilianina, i José Graziano Da Silva. Efa-taona ny faharetan’ny taom-piasana.